Lalao Android maimaim-poana farany - famoahana, hevitra, fitaka | Androidsis
Ho an'ny iray amin'ireo zavatra ampiasainay indrindra, ny hatsaram-panahin'ny Smartphone sy Tablets misy antsika manaraka, miaraka amin'ireo mpikirakira marobe miaraka amina GPUS avo lenta izay tsy tokony hialona. ny lalao video console tsara indrindra ankehitriny, dia ny mankafy ny lehibe lalao isan-karazany atolotra anay ao amin'ny magazay fampiharana Android, ny Play Store o Google Play avy amin'ny Google.
Eto amin'ny Androidsis Ho hitanao ny tolo-kevitra tsara indrindra amin'ny famoahana ny lalao Android farany indrindra ary koa ireo mpivarotra lafo indrindra sy kilasika izay tsy ho faty mandrakizay.
Ao amin'ity fizarana ity Lalao Android Hankafy ny karazany rehetra atolotry ny fivarotana Google ofisialy anay. Lalao Arcade sy Action, sehatra, Adventures, shooter, lalao mailaka saina, lalao mamily fiara na kilalao tsara indrindra hampiala voly ireo ankizy kely ao an-trano. Misy fampahalalana momba ny lalao angano toa ny Minecraft PE, Crossy Road, Sky, Candy Crush, Clash of Clans, Hay Day, Subway Surfers, Plants vs Zombies 2, Agar.io ary Angry Birds.
Ny orinasan-dalao horonantsary tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia nivory ho anao ao amin'ity faritra mampino an'ny Lalao Android; ny tsara indrindra amin'ny Capcom, EA Mobile, Ubisoft, Gameloft, Cartoon Noetwork, Disney ary Sega mba hanomezana anarana vitsivitsy amin'ireo marika lehibe natokana hamoronana lalao manaitra ho an'ny Android.
Lalao Android farany
Fantatrao izao, ataovy milay ny tenanao ary ankafizo izany rehetra izany ny katalaogin'ny lalao goavambe ho an'ny Android atolotray anao maimaimpoana tanteraka amin'ny Androidsis.
ny DaniPlay hace Herinandro 2 .
Izy io angamba no iray amin'ireo sagasy nahomby indrindra tamin'ny tantaran'ny sinema, alohan'ny sasany fanta-daza ...
Ny lalao hetsika 25 tsara indrindra ho an'ny Android
Ho an'ny lalao iray hoheverina ho tsara dia tsy maintsy manolotra mekanika tsotra sy mora ampiasaina izay tsy manery antsika hamaky ...
Misy fanavaozana vaovao ho an'ny PUBG Mobile, ary 1.5 izany. Miaraka amin'ny fanovana, vaovao ary fanatsarana marobe ity ...
Ny ping pong dia iray amin'ireo fanatanjahan-tena latabatra malaza eran'izao tontolo izao, ary koa ...
Lalao 7 mitovy amin'ny Among Us for Android
Raha heverinao fa tonga ny fotoana hanovana ny lalao, saingy tianao ny lalao fanesorana ara-tsosialy, amin'ny ...
Ny lalao tovovavy 6 tsara indrindra ho an'ny Android
ny Aaron Rivas hace 1 volana .
Izahay indray dia mitondra lahatsoratra fanangonana iray hafa ho an'ny Android. Anjarantsika zazavavy izao, ary noho izany dia nanangona ...
Androany, iray amin'ireo fomba fanelingelenana sy fianarana mahomby indrindra ho an'ny ankizy kely ny finday Android….
Betsaka ny lahatsoratra fanangonana izay efa nataontsika tao amin'ny Androidsis. Ao amin'izy ireo no ifandraisantsika amin'ireo fampiharana amin'ny karazany rehetra ...
9 lalao Pinturillo maimaim-poana ho an'ny Android
Ny fitanana nandritra ny roa volana mahery tao an-trano dia nanokana fotoana bebe kokoa amin'ny tontolon'ny fianakaviana, ...
Ny lalao sehatra 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Iray amin'ireo sokajy lalao mahafinaritra sy nilalao indrindra tao amin'ny Play Store ny lohatenin'ny ...
Ny lalao multiplayer tsara indrindra ho an'ny Android
Lalao chess tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao fambolena tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao baseball tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao ivelan'ny Internet tsara indrindra
Ireo emulator PSP tsara indrindra ho an'ny Android
[APK] Ny emulator NES tsara indrindra sy ny lalao angano 7
Emulator Nintendo DS 5 ho an'ny Android
Chicken Scream, ny lalao zana-borona izay fehezin'ny feonao ary mamely azy amin'ny Android
Ny lalao velona tsara indrindra ho an'ny Android
Andro R Survival, famakafakana ny fahavelomana tsara indrindra ho an'ny Android